संसद पुनःस्थापना भएपछि माधव नेपाल खुशी हुदै के भने ? - Reel Mandu
संसद पुनःस्थापना भएपछि माधव नेपाल खुशी हुदै के भने ?
काठमाडौं । नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएकोमा सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्चले नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते विघटन गरेको संसद सोमबार ब्यूँताउने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै उनले भने,‘ म अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वोच्चबाट संविधान र लोकतज्त्रको रक्षा गर्ने काम भएको छ।’
यो सँगै उनले सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा संविधानको राम्रो व्याख्या गरेको छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। उनले भने, ‘सर्वोच्चबाट संविधानमा भएका कतिपय अस्पष्टताबारे पनि स्पष्ट पार्ने काम भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ।’
यो फैसलाका कारण सर्वोच्चको गरिमा र मर्यादा माथि उठेको उनले बताए। साथै अब सबै नेपालीले कानुनी राज्यको अनुभुति गर्ने मौका पाएको उनको भनाई छ। पार्टी विवादका सम्बन्धमा भने अहिले बोल्ने बेला नभएको भन्दै उनले टारे।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद विघटन बदरसँगै प्रतिगमन पनि बदर भएको बताएको छ । सो पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले सर्वोच्चले ओलीको गलत कदमलाई सच्याएको भन्दै यसबाट प्रतिगमन परास्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘प्रतिगमन परास्त भयो’, उनले भने ।